संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री ओली शितल निवासमा, देश अब कता जाला ? – Nepal Japan
संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री ओली शितल निवासमा, देश अब कता जाला ?
नेपाल जापान ५ पुष १५:२२
आफ्ना बिरुद्ध पार्टीभित्रबाट चौतर्फी आक्रमण भएपछि आइतबार विहान अकस्मात बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको छ ।
संसद विघटनको शंका संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएपछि नै भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको एकल निणयमा अध्यादेश आए जस्तै संसद विघटनको प्रस्ताव पनि पारित हुनेमा शंका नहोला तर यसलाई सर्वोच्च अदालतले भने सच्याउन सक्नेछ ।
सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ । तर, राष्ट्रपतिबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको र जनताको अपेक्षा विपरीत संसद विघटन नगर्नेमा धेरैको विश्वास छ ।
यद्यपि राजनीतिक वृत्तमा भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिश अनुसार निर्णय गर्ने आशंका व्यक्त गर्दै शितल निवासले सरकारको कदम नसच्याए सर्वोच्च अदालतले सच्याउने विश्वास लिएका छन् ।
संविधानमा संसद विघटनको स्पष्ट प्रावधान नै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम संविधान विपरीत रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । संविधानको धारा ७६ (७) मा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार पनि गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने प्रावधान छ ।
अहिले त नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेमा उहाँले संसदमा बहुमत लिन सक्ने प्रावधान छ । तर पार्टीभित्रको किचलोले सरकार त टिक्ला तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानमाथिको अविश्वास भने बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिश राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेर असंवैधानिक तथा अस्थिरता जन्माउने गलत कदम नसच्याए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताउँछन् । एकजना न्यायाधीशका अनुसार विगतमा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेका बेला अदालतले निकास दिएको नजिर छ । त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना छ ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ ।